သတင်းနှင့်ဘလော့ - ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin အပေါင်းအဖေါ်များ
Happy Spring, APIE Supporters! Spring marks one of my favorite times of the year as we enter the final nine weeks of the school year
Ashley Yeaman	မတ် 25, 2022
Rev. Dr. Daryl L. Horton is an APIE Board Member and Pastor of Mount Zion Baptist Church in Austin. He has more than 20 years
Ashley Yeaman	မတ် 23, 2022
A Slice of APIE: November 2021 Newsletter
Dear APIE Community, Welcome back to the ’21-’22 school year, where APIE programs are in full swing! We are so excited to be back on
Ashley Yeaman	နိုဝင်ဘာ 4, 2021
A Slice of APIE: June 2021 Newsletter
Dear APIE Community, As we wrap upatruly unforgettable school year, I want to thank each of you for your support. Whether you volunteered
Ashley Yeaman	ဇွန် 11, 2021
APIE Welcomes Four New Board Members
Austin Partners in Education (APIE) is pleased to announce the selection of four new members to the APIE Board of Directors, who will each be
Ashley Yeaman	ဇွန် 10, 2021
April is Volunteer Appreciation Month, and throughout the month we show appreciation and celebrate all our amazing volunteers! For the 2020-21 school year, we transitioned
Ashley Yeaman	ဧပြီ 28, 2021
ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin မာရသွန်မှတစ်လကွာဝေးသောတရားဝင်ဖြစ်သည်။ မာရသွန်သည်အော်စတင်မြို့မှတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီးSundayပြီလတနင်္ဂနွေတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်
Ashley Yeaman	မတ် 25, 2021
ချစ်ခင်ရပါသော APIE အသိုင်းအဝိုင်း၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလသည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဂရုစိုက်ရန် ထပ်မံ၍ ကြင်နာမှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်ပင်သတိပေးခဲ့သည်
Ashley Yeaman	မတ် 17, 2021
COVID Times သတင်းစာ၌စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဤ blog post ၌ Math Classroom နည်းပြစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်လက်ရှိဆက်သွယ်ရေး Intern Briana Kallenbach သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမတိုင်မီနှင့်ကာလအတွင်းစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေသည်။
Ashley Yeaman	မတ် 16, 2021
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကပညာရေးတွင် Austin Partners သည် Austin ISD P-TECH တိုးချဲ့မှုကိုထောက်ပံ့ရန် Texas Greater Foundation မှ $450,000 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းသုတေသနကိုအာရုံစိုက်နေကြသည်
Ashley Yeaman	ဖေ ‌ စက်တင်ဘာလ 12, 2021
APIE ဆရာနှင့်အတူတစ် ဦး ကမေး & အဖြေ
Derrick Townsend Q: How has your experience serving asamentor for APIE impacted your life? Growing up withoutafather figure in my life
Ashley Yeaman	ဇန်နဝါရီ 15, 2021
APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: ဒီဇင်ဘာလ 2020 သတင်းလွှာ
ချစ်ခင်ရပါသော APIE အသိုင်းအဝိုင်း၊ ဤကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ကြားရသောကောင်းသောအရာများကိုကျွန်ုပ်အမြဲသတိရနေပါသည်။
Ashley Yeaman	ဒီဇင်ဘာ 7, 2020